Xasaasi: Maxamed Bin Salman ma jebin doonaa heshiiska 250 Sano jirka ah ee Wahaabiyada iyo boqortooyada Sucuudiga? - Caasimada Online
Home Dunida Xasaasi: Maxamed Bin Salman ma jebin doonaa heshiiska 250 Sano jirka ah...
Xasaasi: Maxamed Bin Salman ma jebin doonaa heshiiska 250 Sano jirka ah ee Wahaabiyada iyo boqortooyada Sucuudiga?
Boqortooyada Sucuudi Carabiya waxaa ay hadda ku jirtaa isbeddel dar dark u socda oo Siyaasadda iyo Bulshada ah ah,waxaana boqortooyadda hadda saran tahay waddada qunyarsocodnimada,waxaana uu dhaxal sugaha doonayaa in uu dunida la hortago Sucuudiga oo ka madaxbanaan xagjirnimada.
Waxaa loo arkaa in uu yahay maskaxda ka dambeysa isbeddelka dhinaca istiraatiijuyadda ah ee hadda ka socda Sucuudiga,kaas oo lagu lagu jiheynayo ilaha dhaqaalaha Sucuudiga,sidoo kalena lagu xaddidayo awoodda Culimada Diinta.
“waxaan ku laabaneynaa wixii aan ahaan jirnay oo ah waddan qunyarsocod Islaami ah,kaas oo u furan diidamaha iyo Adduunka”ayuu yiri Maxamed Bin Salmaan oo ka hadlayay kulankii maalgagashiga Caalamiga ah ee Bishii October-2017 ka dhacay Magaalada Riyaad.
Sidaas darted, waxaa la doonayaa in turjumaadda qaldan ee Culimada bixyeen laga hortago si aysan u dhicin kacdoonkii Islaamiga Iraan oo ilaa hadda maamula dalkaas..